गुल्मीमा पछिल्लो समय कहाँ कति नागरिक क्वारेन्टाइनमा ? - Gulminews
गुल्मीमा पछिल्लो समय कहाँ कति नागरिक क्वारेन्टाइनमा ?
२०७७ जेष्ठ २४, १६:१६
गुल्मी जेठ २४। गुल्मीमा पछिल्लो समय ४ हजार बढी नागरिक क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण भारत लगायतका स्थानबाट जिल्लामा प्रवेश गरेका ४ हजार १ सय ३८ जना क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले जानकारी दिए ।
प्रजिअ शर्माका अनुसार शनिबार सम्म पुरुष ३ हजार ७ सय २८ र महिला ४ सय १० जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमा पर्ने रेसुङ्गा नगरपालिकाले निर्माण गरेको विभिन्न क्वारेन्टाइनमा ३ सय ९६ जना रहेका छन् । पुरुष ३ सय ४३ र महिला ५३ जना रहेका छन् ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाले स्थापना गरेको आइसोलेशनमा ९ जना रहेका छन् । दुई महिला र ७ पुरुष छन् । रेसुङ्गा नगरपालिकामा ४ सय बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । २० बेड क्षमताको आइसोलेशन छ । क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनको क्षमता बढाउने योजनामा नगरपालिका छ ।
सदरमुकाम बाहिर रहेको मुसिकोट नगरपालिकामा ६ सय ३९ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । पुरुष ५ सय ८८ र महिला ५१ जना छन् । त्यस नगरपालिकामा ६ सय ५० बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा २ सय २६ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । पुरुष २ सय १४ र महिला १२ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । त्यस गाउँपालिकामा २ सय ५७ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकामा १ सय ९० जना क्वारेन्टाइनमा छन् । १ सय ७८ पुरष र १२ महिला क्वारेन्टाइनमा छन् । २ सय ४७ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइनमा निर्माण गरिएको छ । आठ बेडको आइसोलेशन कक्ष निर्माण गरिएको छ ।
छत्रकोट गाउँपालिकामा ४ सय १८ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । पुरुष ३ सय ७२ र महिला ४६ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । ४ सय ७० बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । तीन बेडको आइसोलेशन कक्षको स्थापना गरिएको छ ।
इस्मा गाउँपालिकामा ५ सय ५१ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । पुरुष ४ सय ८७ र महिला ६४ जना छन् । क्वारेन्टाइनको क्षमता ५ सय ६० बेड छ ।
मालिका गाउँपालिका २ सय ८८ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । पुरुष २ सय ५५ र महिला ३३ जना रहेका छन् । ३ सय ७० बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ ।
धुर्कोट गाउँपालिकामा ४ सय ७२ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । पुरुष ४ सय २८ र महिला ४४ जना छन् । आइसोलेशनमा १ जना पुरुष उपचाररत छन् । ४ सय ७५ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । २० बेड क्षमताको आइसोलेशन कक्षको स्थापना गरिएको छ ।
कालिगण्डकी गाउँपालिकामा ९८ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । पुरुष ८१ र महिला १७ जना छन् । ३ सय ३६ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ ।
सत्यवती गाउँपालिकामा २ सय २६ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । पुरुष १ सय ९२ र महिला ३४ जना रहेका छन् । २ सय ३० बेड क्षमताको क्वारेन्टीन निर्माण गरिएको छ । दश बेडको आइसोलेशन कक्ष निर्माण गरिएको छ ।
गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा ३ सय ९० जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । ३ सय ६८ पुरुष २२ जना महिला क्वारेन्टाइनमा छन् । ४ सय ५७ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ ।
मदाने गाउँपालिकामा २ सय ४४ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । पुरुष २ सय २२ र महिला २२ जना छन् । २ सय ७० बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन क्षमता रहेको छ । क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ । जिल्लामा १ सय ९५ स्थानमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनको क्षमता ४ हजार ७ सय २२ रहेको छ ।